7 ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံး Glamping နေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံး Glamping နေရာများ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 11/04/2021)
သီချင်းဆိုငှက်များကိုနှိုးထ, နှင့် ရင္သပ္ရႈေအမြင်ချင်း မင်းရဲ့အိမ်တံခါးကနေ, ဇိမ်ခံ yurt သို့မဟုတ် treehouse ၌တည်၏. ဥရောပရှိအလှဆုံးနေရာများတွင် ၀ မ်းနည်းခြင်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ကြီးမားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. လာမည့်7ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးပြောင်မြောက်သောနေရာများသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်အားလပ်ရက်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်. အစိမ်းရောင်လျှပ်စစ်မီးနှင့်, ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း, နှင့်ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်အခွင့်အရေး, glamping သည်ဥရောပ၌အားလပ်ရက်အပန်းဖြေရန်အဆုံးစွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်.
1. ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံး Glamping နေရာများ: နယ်သာလန်၌ Veluwe သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး
Veluwe ၏ထူးဆန်းသောသစ်တောများမှဖယောင်းတိုင်ညစာ, ပထမ ဦး ဆုံးနေရောင်ခြည်နှင့်အတူသစ်ပင်များကြားတွင်တက်လမ်းလျှောက်. ၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးသောစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောအတွေ့အကြုံ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် အမျိုးသားဥယျာဉ် နယ်သာလန်နိုင်ငံ. သင်စူးစမ်းလေ့လာရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်2သဘာဝသယံဇာတများ: Veluwezoom National Park with the most beautiful viewpoint the Posbank, သို့မဟုတ် Hoge Veluwe, တောင်တက်နိူးများအတွက်ပရဒိသု.
ဤနိုင်ငံများတွင်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်, သင်လှပသော yurts တွင်နေရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်, Safari အဘိဓါန်တဲများသို့မဟုတ် treehouses, Veluwe အတွက်နေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်စရာ glamping. ဥပမာ, အဆိုပါ Schenkenshul သဘာဝအရံ, Hoenderloo အနီး, များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအစက်အပြောက်ဖြစ်ပါတယ် မိသားစုစခန်းချ, အိမ်မှာအဆောက်အ ဦး များနှင့်နှစ်သိမ့်အပေါ်အရှုံးမပေးဘဲ.
2. ပြင်သစ်တွင် Echologia Glamping Spot
Mayenne အတွက်အကြီးဆုံးရေအရံ၏ဘဏ်များတွင်, သင်ဟာအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဂေဟစနစ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်. La Loire ချိုင့်ဝှမ်းတွင်သင်ကရေပေါ်အခန်းတွင်နေရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်, သစ်တောအခန်း, သို့မဟုတ်ဇိမ်ခံတဲ.
လှေခါးထစ်ပေါ်မှာနံနက်စာသုံးဆောင်, မြစ်ထဲမှာနူး, သို့မဟုတ်စပျစ်ရည်တစ်ခွက်ကိုခံစားခြင်းကဒီမှာ glamping သည့်အခါသင်ရရှိမည့်အခွင့်အရေးအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်. လော်ရီချိုင့်ဝှမ်းသည် ဝိုင်ဒေသ ပြင်သစ်မှာ, ဒါကြောင့်, theရိယာ၏အကောင်းဆုံးဝိုင်များသည်သင်၏ဇိမ်ခံတဲသို့မဟုတ်အခန်းမှအနည်းငယ်သာခြေလှမ်းဖြစ်သည်. Echologia အဘို့ကြီးစွာသော glamping နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားများအတွက် ပြင်သစ်မှာ, နှင့်မိသားစုအားလပ်ရက်အပန်းဖြေ.
3. ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံး Glamping နေရာများ: ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ Rhone-Alpes တွင်ရင်ခုန်စရာပျော်ရွှင်မှု
ကြယ်အောက်မှာအိပ်, ဒါကြောင့်အပြင်မှာနှင်းကျသောအခါမီးဖိုများကတက်နွေး, ပြင်သစ်အဲလ်ပ်စ်များသည်မှော်ဆန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ပြင်သစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်းရှိရိုနယ်areaရိယာသည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးရွှင်လန်းဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ထို့ကြောင့်, သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆောင်းတွင်းနတ်သမီးပုံပြင်အားလပ်ရက်၌ဇိမ်ကျသောစိမ်းလန်းသောအမိုးခုံးသို့မဟုတ်ခေါင်းလောင်းတဲ၌ရှိသည်.
သို့သျောလညျး, သင်နွေ ဦး အားလပ်ရက်ပိုနှစ်သက်လျှင်, ထို့နောက်သင်သည်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိအဲလ်ပ်တောင်များကိုလုံးဝချစ်လိမ့်မည်. သင့်ရဲ့နံနက်ကော်ဖီရှိခြင်း, ရိုင်းသဘာဝကဝိုင်းရံ, ဘ ၀ ၌အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, တစ် ဦး ထက်ပိုတက်ကြွအားလပ်ရက်သည်, သင်သည်ခမ်းနားထည်ဝါသောတောင်တန်းများကိုတက်။ သို့မဟုတ်အာဒက်ချ်မြစ်၌အပျော်စီးလေ့ကျင့်နိုင်သည်.
ဒါကြောင့်အီတလီနှင့်ပြင်သစ်အကြားပါပဲ, သင်ကအလွန်လွယ်ကူသောတွေ့ပါလိမ့်မယ် အဲဒီမှာရထားနဲ့သွားလာပါ.
4. ဗဟို Bohemia ခုနှစ်တွင် Glamping, ပရာ့ဂ်
Bohemia သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိပို့စကတ်ဒေသဖြစ်သည်. ၎င်း၏ထူးခြားမှုရာသီအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူခါးပန်းကိုပြောင်းလဲရန်theရိယာရဲ့အရပျ၌တည်ရှိသည်. နွေရာသီတွင်၎င်းသည်အစိမ်းရောင်နှင့်ခမ်းနားထည်ဝါစွာတွေ့လိမ့်မည်, and in the fall in beautiful golden and orange tones. On the banks ofalake, တောင်ထိပ်များ, သို့မဟုတ်သီးခြားသစ်တော, Bohemia ရဲ့အိုအေစစ်ပရာ့ဂ်ကနေပဲတစ်နာရီဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်မင်းကကမ္ဘာအားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးကိုခံစားနိုင်ပါတယ်, သဘာဝတရား၏စိတ်နှလုံး၌တည်၏.
Lipno ရေကန်ပတ်လည်တွင်သို့မဟုတ် Jizera တောင်တန်းများတွင် ၀ မ်းသာစရာနေရာထိုင်ခင်းများစွာရှိသည်. ထို့ကြောင့်, ရေကန်နှင့်သစ်တောရှုခင်းများကိုသင်ခံစားနိုင်သည်, သင်၏ရဲတိုက်မှ, သို့မဟုတ်သဘာဝအတွက်ပုဂ္ဂလိကရေပူစည်ပိုင်း.
5. ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံး Glamping နေရာများ: ဆွစ် Alps ခုနှစ်တွင်ဇိမ်ခံ Glamping Pods
အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးတောင်စောင်း, အကောင်းဆုံးအမြင်များ, ညာဘက်သင့်ရဲ့ glamping အမိုးခုံးအိမ်တံခါးမှာ. အဆိုပါ ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်းများသည်မှော်အတတ်ဖြစ်သည် မည်သည့်ရာသီမဆို, ယခုတွင်သင်သည်အလယ်ဗဟို၌နေနိုင်သည်. ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်းသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိခရီးသွား for ည့်သည်များအတွက်အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်, အလွန်နည်းပါးသော glamping နေရာတစ်ခုအဖြစ်ကသိကြ၏.
Alps ရှိ ၀ မ်းသာဖွယ်နေရာထိုင်ခင်းသည်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, နှင့်အံ့သြဖွယ်နေ. နှင်းဖုံးတွေကြားထဲမှာသင်နေနိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဇိမ်ခံခုံးအတွင်းပိုင်း, နွေးပြီးပျူငှါနွေးလိမ့်မည်. သငျသညျပါရှုခင်းနိုးထပါလိမ့်မယ်, သင့်ရဲ့အဆင်ပြေအိပ်ရာကနေတိုက်ရိုက်တောင်တက်သွား, အရသာနံနက်စာစားပြီးနောက်.
ရှုခင်း, လေကောင်းလေသန့်, နှင့်စွယ်စုံလမ်းကြောင်းဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်းတစ်ခုထဲကတစ်ခုပါစေ7ဥရောပ၌အကောင်းဆုံး glamping သောနေရာများ.
6. Puglia ခုနှစ်တွင်ဇိမ်ခံ Glamping တဲ
Adriatic နှင့် Ionian ပင်လယ်အနီးတွင်တည်ရှိသည်, Puglia တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် နေရာကောင်း ဥရောပ၌အကောင်းဆုံး glamping အားလပ်ရက်သည်. လှိုင်းတံပိုးများ၏အသံ, ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့အပြာရေ, ညနေခင်းလေပြေ, နှင့်အီတလီအစားအစာ, ဒါထက်မဆိုပိုကောင်းနိုင်သည်. ပေမဲ့, ဇိမ်ခံတဲ၌ glamping, ဟိုတယ်၏အခွင့်အရေးခံစား, သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အလျှော့မပေးဘဲ – Glamping သည်ယနေ့ခေတ်အားလပ်ရက်ခရီးအတွက်အန္တိမနည်းလမ်းဖြစ်သည်.
Puglia သည်တောက်ပနေသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, သင်၏တဲကိုကမ်းခြေသို့၎င်း၊ ပင်လယ်ကိုအပေါ်စီးကုန်းမြင့်မြင့်သို့တက်လှမ်းနေခြင်း, မည်သူမဆို၏အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျ Apulia ရွာ၌ glamping နေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်စရာအများအပြားတွေ့လိမ့်မည်.
ရောမ Puglia တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ
ရထားနှင့်အတူ Puglia မှ Naples
Bari တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Puglia ရန်
Florence Puglia သို့ရထားနှင့်အတူ
7. Tuscany တွင် Romance နှင့် Glamping
Romance သည် Tuscany တွင်အကောင်းဆုံး glamping ကိုဖော်ပြသောစကားလုံးဖြစ်သည်. Sienna နှင့်မနီးမဝေး, နှင့်မြေထဲပင်လယ်, Tuscany ၏ကတ္တီပါအစိမ်းရောင်တောင်ကုန်း၌တည်၏, အားလပ်ရက်အတွက်ရင်ခုန်စရာနှင့်စိမ်းလန်းသောရွက်ဖျင်တဲများကိုစောင့်ဆိုင်းသည် 2.
Tuscany အတွက်, သငျသညျ truffles ရှာဖွေနေသွားနိုင်ပါတယ်, takeacooking class and prepare pasta for dinner. တစ်နည်းအားဖြင့်, သငျသညျပတ်ပတ်လည်သံသရာနိုင်ပါတယ် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အီတလီရွာများ မင်းရဲ့ Lazy Olive Glamping site ကို. ထို့အပြင်, Tuscany တွင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းသည်သင့်အားသဘာဝတရား၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုခံစားစေသည်, သံလွင်ပင်နောက်ကွယ်မှအောင်းနေနိုင်ပါတယ်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏အားလပ်ရက်အစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်7ရထားဖြင့်ဥရောပ၌အကောင်းဆုံး glamping သောနေရာများ.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံး Glamping နေရာ (၇) ခု” ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ထည့်သွင်းချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-glamping-places-europe%2F%3Flang%3Dmy‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
BestGlampinginEurope စခန်းချ GalmpingPlacesInEurope glamping GlampingDestinationsEurope GlampingPlaces ဇော်လင်း တဲများ Winterholiday